Aza manontany, fa ny Arabian Travel Market Dubai dia nametraka fironana vaovao amin'ny Travel and fizahan-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Aza manontany, fa ny Arabian Travel Market Dubai dia nametraka fironana vaovao amin'ny Travel and fizahan-tany
Airlines • Airport • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana UAE • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao lafo vidy • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Tena nahagaga ny naheno tamin'ny mpampiranty anay ny fahatsapan'izy ireo fa milamin-tsaina sy mahazo aina izy ireo eo am-panaovana asa any amin'ny tsenan'ny Travel Arabian. Nisy rivo-piainana tsara sy fahatokisana fa efa ho amin'ny fanarenana ny indostrian'ny fizahantany ”
Faly be aho noho ny ekipanay tsena Travel Arabia, rehefa manakatona ny lambam-baravarana anio amin'ny ATM 2021 ao Dubai izahay, ny talen'ny fampirantiana Danielli Curtis dia nandefa tao amin'ny kaontiny Linkedin.
Ny valin-kafatra nasehon'ireo mpampiranty ao amin'ny tsenan'ny Travel Arabian dia tena tsara tokoa ary maneho mariky ny fanantenana sy ny fanamaivanana.
UNWTO sy WTTC dia tsy naneho saina tao amin'ny ATM tany Dubai, raha nanatrika kosa ny WTN
“Efa nahazo valiny tsara dia tsara avy tamin'ny rehetra izahay momba ny kalitaon'ny fivoriana sy ireo fotoam-pivoriana nahavariana. Ny fihaonana miaraka aminareo rehetra dia iray tamin'ireo zava-bita nahagaga indrindra ary nanana tombony izahay nitondra anao ny hetsika fitsangatsanganana sy fizahan-tany voalohany tao anatin'ny 18 volana », hoy ny valin'ny talen'ny fampirantiana Danielle Curtis nisolo tena ny mpikarakara UK Reed Travel Expo. Ny teniny dia mitovy amin'ny sain'ny olona rehetra manatrika ity hetsika fizotran'ny fironana any Dubai ity.
Ny tsena fitsangatsanganana arabo 2021 dia kely kokoa raha oharina amin'ny fanontana teo aloha, saingy amin'ny afovoan'ny pendemika dia antenaina izany.
Rehefa heverina fa io no famantarana voalohany sy fotoana mety hiarahan'izao tontolo izao mivantana, dia nahagaga fa tsy nanararaotra fampirantiana tao amin'ny ATM ireo amerikana, Aostralia, Afrika, ny ankamaroan'ny Azia, ary i Eropa. Ny faritra sasany eto amin'izao tontolo izao, ao India, Nepal, Brezila, na Afrika atsimo dia miaina toe-javatra mampidi-doza COVID-19 ary mazava ho azy fa tsy nampoizina ho hita izany. Na izany aza, ny ATM dia fanombohana ary na firy na firy na firy ireo fampirantiana dia mijanona ho fironana efa napetraka ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, ary manokana ho an'ny sehatra Fihaonana sy MICE.
Ankoatry ny fanatrehan'ny besinimaro avy amin'ny Faritra Golfa, Alemana ary mitsidika manokana an'i Berlin dia niezaka mafy ny ho hita. Io irery no firenena nikarakara valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety.
The World Travel and Tourism Council (WTTC) vao vita ny azy fihaonana an-tampony manerantany tany Cancun, Mexico lvolana ast. WTTC dia nampita ny fombany mba ho lasa modely manerantany ho an'ny hetsika. Ny Vovonana WTTC dia hita fa mpamaky ranomandry amin'ny hetsika fitsangatsanganana sy fizahantany manerantany.
Hafahafa izany, fa tsy teo amin'ny ATM ny WTTC. Ny tale jeneralin'ny WTTC, Gloria Guevara, dia tsy nisy hevitra momba ny antony tsy nikirakiran'ny fikambanana mihambo ho misolo tena ny indostria tsy miankina amin'ny hetsika Dubai.
Ny filohan'ny WTM dia mihaona amin'ireo mpikambana
UNWTO, ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany tsy teo koa. Nanokatra biraom-paritra ao Arabia Saodita ny UNWTO sy WTTC. Tamin'ny nandraisan'i Saudi Arabia andraikitra lehibe azy tamin'ny fihaonana an-tampon'ny Cancun WTTC sy ny tsenan'ny Arabian Travel any Dubai, dia tsy nanararaotra naneho firaisankina sy fitarihana ny UNWTO sy ny WTTC.
Mpikambana marobe an'ny vao naorina Networ momba ny fizahantany manerantanyk (WTN) dia niaraka tany Dubai. Hoy ny filoha Juergen Steinmetz: “Tsara ny nanenjika ny mpikambana. Ny ATM dia nanokatra ny fahafaha-manao ny sehatry ny dia.
Ny tsenan'ny Travel Arabian dia nilaza tamin'ny filohan'ny tambajotran'izao tontolo izao momba ny fizahantany: "Noho ny famerana ny fahaiza-manao dia kely kokoa noho ny tamin'ny taona maro ny takarivan'ny ATM ka matahotra aho fa tsy azonay zakaina ny olona rehetra noho ny fetra napetraky ny lalàna COVID-19 sy ny fanasana ho an'ny antoko tambajotra ATM Tsy azo atao izany. ”
Raha tokony hiantsoantso ho an'izao tontolo izao izy, dia niaro tena ny mpikarakara mba tsy hampiharihary ny fampiratiana sy ny tenany amin'ny fanontanian'ireo haino aman-jery. Ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety eTurboNews dia nahafantatra izany, izay nokarakarain'ny Birao fizahan-tany Alemanina sy mitsidika an'i Berlin.
Konferansa ho an'ny mpanao gazety alemanina
Ny ATM dia fifangaroan'ny fampirantiana sy fampiratiana. Dinika marobe natao mikasika ny seranam-piaramanidina, fandraisam-bahiny ary fampiasam-bola.